Miisaaniyada Heerka 5aad ee Talooyin si aad xogta uga soo jiidato Website-ka
Macluumaadka ma aha mid had iyo jeer ku jira qaab la aqbali karo, laakiin waxaa laga helaa Internet-ka
. Macluumaadka intooda badan waxaa lagu heli karaa luuqado kala duwan, taas oo adkeyneysa inaan fahamno wax kasta oo aan la heli Karin CSV ama qaab kale. Xaaladahan oo kale, way kugu adkaan doontaa inaad isticmaasho macluumaadka si sax ah. Sidoo kale, kuma dhajin kartid datasets iyo si sahlan u sahlan - in leather hat. Sidaa daraadeed, xoqista xogtu waa habka kaliya ee loo abuuro nuqullo qaabab la akhristo oo la heli karo.
1. Isticmaal Google Spreadsheets iyo Google Chrome
Waa ammaan in la yiraahdo Google Chrome iyo Google Spreadsheets labadaba waxay ka caawiyaan xoqidda xogta 5 daqiiqo, mana u baahnid inaad geliso koodhka. Ogaanshaha qaab-dhismeedkaaga ayaa ah talaabada ugu horeysa ee xoqidda iyo isticmaalka macluumaadka. Habka ugu fudud ee lagu sameeyn karo waxaa ka mid ah amarrada ImportHTML ee Google Spreadsheets. Waxay u shaqeeyaa sida sixir ah waxayna xakameysaa boggaaga oo dhan adiga oo aan wax ka tarin tayada. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa barnaamijka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka ah, oo leh waxyaabo fara badan.
2. Isticmaal Scraperwiki natiijooyinka wanaagsan
Haddii aad rabto inaad xoqdo xogta qallafsan oo aadan haysan wax barnaamij ah, waa inaad isku daydaa. Waxay kaa caawineysaa inaad xoqdo boggaga internetka ee kala duwan iyo website-yada culus oo aad gabi ahaanba ku soo gashid boggaaga dariiqa adag ee dhowr daqiiqo gudahood. Qalabkani wuxuu u qalmaa inuu maalgeliyo tamartaada iyo wakhtigaaga, wuxuuna hubiyaa inaad bixiso natiijooyinka ugu fiican uguna fiican. Scraperwiki waxay leedahay hawlo kala duwan, sida inaad qori karto qawaaniin kala duwan, waydiisan kartaa khabiirada inay kuqoraan waraaqaha ku qoran magacaaga iyo la xariir bulshooyinka Scraperwiki si natiijooyin fiican leh.
3. Fahmaan qaab dhismeedka waraaqaha
Waxa kale oo muhiim ah in la fahmo qaab-dhismeedka xoqitaanka. Inta badan jaranjarada ayaa ka yar 3 qaybood oo waaweyn: safka bogagga si loo soo saaro, aagga xogta habeysan ee lagu keydiyo sida xog ururin, iyo faylka ama khafiifiyaha kaa caawinaya ku darista URL.
4. Fahmaan muhiimada ay leedahay xoqidda:
Dhaqdhaqaaq waa habka looga qaado xogta laga helo boggaga internetka, faylasha PDF, iyo dukumentiyo kale, oo ka dhigaysa mid waxtar leh oo loo akhrisan karo. Waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu faa'iidada badan oo dhameystiran oo aad ku hirgelin karto si aad u ururiso oo u isticmaasho xogta. Qaybta ugu wanaagsani waxay tahay inaadan u baahnayn inaad leedahay xirfadaha barnaamijka si aad u xoqdo xogta haddii aad isticmaalayso qalabka sida Kimono iyo soo dejinta. io.
5. Baro sida loo xoqdo:
Waa inaad barataa sida loo xoqdo haddii aad rabto inaad xogta ka soo qaadato bogaga internetka si joogto ah. Waxaa intaa dheer, waad ku baran kartaa marka aad haysato macluumaad badan si aad uga heshid amma aadna aad rabto in aad dib ugu isticmaasho website-kaaga. Haddii aad hesho waraaqo email ah oo ku saabsan badeecooyin iyo adeegyo xiiso leh, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xoqdo oo barato asaasaheeda. Waa run in xoqitaanku yahay hawl fudud oo u baahan xirfado barnaamijyo yar. Qaar ka mid ah duubista webka qalabku uma baahna inaad barato xirfadaha barnaamijka iyo luuqadaha, taas oo micnaheedu tahay inaad qaban karto hawshaada adigoon lahayn xeer.